7 Signs & Symptoms Of Obsessive Compulsive Disorder | Utsav 360 WATCH NOW
‘प्रतिष्ठानमा आउने नयाँ भीसी थप अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ’
देवानी तथा फौजदारी संहिताका एक वर्ष
रवि लामिछानेसहित तीन जना बिरुद्ध किटानी जाहेरी
सप्तकोसी बाढीपीडितहरु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलनमा
१२ करोडको मेसिन पर्खँदै १३ करोडको ल्याण्डफिल्ड
आज देशभर रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमा मनाइदै
​यसरी छुटकारा पाउनुहोस् पेट फुल्ने समस्याबाट
न्यूजलय सोमबार ०५, भदौ २०७४
गलत खानपानको कारण पेटमा ग्याँस जम्मा भएर वा पानी जम्मा भएर पेट फुल्ने गर्छ । आजकाल धेरै मानिसहरु बारम्बार पेट फुल्ने समस्याबाट ग्रसित छन् । यो सामान्य जस्तो लाग्ने समस्याको कारणले धेरै मानिसहरु हैरान भएका छन् । चिकित्सकहरुको अनुसार खान पानसँग जोडिएका केही सावधानीहरु अपनाउने....
​खाली पेटमा कालो अंगुर खानुका फाइदाहरु
अंगुर एउटा मिठो फल हो । यो गुलियो हुन्छ तर यसमा चिनीको मात्रा भने पटक्कै हुन्न । अंगुरमा सबै आवश्यक पोषक तत्त्व जस्तै पानी, सोडियम, पोटेसियम, साइट्रिक एसिड, म्याग्नेसियम र आइरन हुन्छन् । अंगुर सेवन गर्नाले विभिन्न रोगबाट छुट्कारा पाइन्छ । जस्तैः
​सास गनाएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
न्यूजलय आइतबार ०४, भदौ २०७४
हामी जतिसुकै सजिएर हिडे पनि हाम्रो सास गनाउँछ भने सबैजना हामीसँग तर्किन्छन् । सास गनाउने मानिससँग कोही पनि कुरा गर्न वा सँगै बस्न रुचउँदैनन् । यस्तो हुँदा उक्त व्यक्तिको आत्मविश्वास पनि हराउँछ ।
सास गनाउनुका अनेकौं कारण हुन सक्छन् । खानपिन नमिलेर पनि यस्तो....
सोयाबीन खानुका बेफाइदाहरु
सोयाबीन प्रोटीनको राम्रो स्रोत मानिन्छ । यसमा विद्यमान भिटामिन ए, बी कम्प्लेक्स, खनिज र प्रोटीनले शरीरमा आवश्यक अमिनो एसिडको आपूर्ति गर्छ । तर यसका बेफाइदा पनि छन् । यसमा भएका ट्रान्स फ्याटले मुटुरोग तथा मोटोपना जस्ता समस्याहरूलाई बढाउँछ । बिरामी मानिसहरूले सोयाबीन खानु हुँदैन ।
​हत्केलामा धेरै पसिना आउँछ ? यसो गर्नुहोस्
गर्मीको बेला हत्केलामा हलका पसिना आउँनु सामान्य हो । तर, कतिपय मानिसको हत्केलामा धेरै ने पसिना आउने गरेको पाइन्छ । जसकारण विभिन्न काममा उल्झन पैदा समेत गर्छ । यस समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ भने यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् ।
१. काचो आलु
​यस्ता समस्या भएका व्यक्तिले खानुहुँदैन दालचिनी
न्यूजलय शुक्रबार ०२, भदौ २०७४
प्राय अधिकांशको घरमा दालचिनीको प्रयोग हुनेगर्छ । यसको प्रयोगले खाानाको स्वाद बढ्छ । स्वादका साथसाथै दालचिनीमा स्वास्थका लागि पनि धेरै नै फाइदा गर्छ । तर, यसको अधिक प्रयोगले भने शरिरलाई हानी गर्छ । यस्ता मानिसहरुले भने दालचिनी खानुहुँदैन :
१. गर्भवती महिला
किन हुन्छ दाँत सिरिङ ?
चिसो पानी तथा गुलियो वस्तु खाँदा दाँत दुख्ने, दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्यालाई चिकित्सकीय भाषामा हाइपर सेन्सिटिभिटी भनिन्छ । हाइपर सेन्सिटिभिटी एक किसिमको दुखाइ हो, जुन दाँतको बीचको तह डेन्टिन देखिएर हुने गर्दछ । यस रोग जन्माउने तथा बढाउने काम तातो, चिसो, ब्रस गर्दा अथवा छुँदा,....
कस्ता व्यक्तिले उखुको रस खानुहुँदैन ? जान्नुहोस्
न्यूजलय बिहीबार ०१, भदौ २०७४
तपाई दिनभरिको थकान मेटाउन एक गिलास उखुको रस पिउँनुहुन्छ भने आजै देखि पिउँन छोड्नुहोस् । त्यसो त उखुको रस एक गुणकारी पेय पदार्थ हो । यसमा क्याल्सियम, पोटासियम, आयरन, म्याग्नेसियम र फस्फोरसजस्ता धेरै पोषक तत्व पाइन्छ, साथै उखुको रसले शरीरमा रगतको बहावलाई पनि सही गराउँछ....
​अदुवा पानी खानुका फाइदा
प्रायः अदुवालाई मसालाको रुपमामात्रै प्रयोग गर्ने चलन छ । तर, यसलाई टुक्रा पारी पानीमा मिसाएर नियमित सेवन गरेमा यसले धेरै खाले रोगहरुबाट बचाँउछ । अदुवामा पाइने एन्टी ब्याक्टेरियल, एन्टी फँगल र एन्टि इन्फ्लेमेटरी जस्ता गुणले हाम्रो शरिर स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ ।
किन खाने मुलाको पात ? यस्ता छन् फाइदा
प्रायः मानिहरु मुलाको पात फ्याक्ने गर्छन । तर तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ मुलाभन्दा बढि मुलाको पात खानु फाइदाजनक हुन्छ । यसमा धेरै पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छ जसले हामीलाई धेरै खालका स्वास्थ–सम्बन्धी समस्याहरुबाट बचाँउछ ।
१. क्यान्सरः मुलाको पातमा एन्थोसाइनिन हुन्छ जुन क्यान्सरका बिरामीको लागि धेरै....
पूर्वयुवराज पारसले गरे प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार
बुटवलमा सुतेर विरोध प्रदर्शन
रवि समर्थकको प्रदर्शनमा सहभागी नहुनु कार्यकर्तालाई नेकपाको निर्देशन
युगान्डामा तेल ट्यांकरमा आगलागी हुँदा १० जनाको मृत्यु
तीन जना प्रहरी जवानविरुद्ध मुद्दा
डेढ महिनादेखि अवरुद्ध भोजपुर टक्सार सडक सञ्चालन